I-Crofter's Cottage-Idolophu kunye nelizwe lokuRetreat
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJennifer
I-Crofter's Cottage, kumda weKirksville, yindawo ekhululekile, efanelekileyo yokubuyela. Eli khaya linamagumbi okulala amathathu anekhitshi elixhotyiswe kakuhle, kunye nendawo yokuhlala yesibini enendawo yokuhlamba impahla. Ngaphandle kweefestile ezingemva uyakonwabela imbonakalo yelizwe, nangona ukwi-2 yeemayile okanye ngaphantsi ukuya eTruman, ATSU, nasedolophini. Ukuhamba intaba kwiBig Creek Conservation Area kukwangaphantsi kweekhilomitha ezi-2.
I-Crofter's Cottage inamkela ngezinto ezininzi ezimnandi zekhaya. Ine-WiFi kunye ne-Smart Roku TV. Ikhitshi eligcweleyo lixhotyiswe ngemicrowave, ikofu, kunye nezinto zokupheka. Iintsapho ezinabantwana abancinci ziya kufumana isitulo solutsha kunye nesihlalo esikhuthazayo kunye nesetingi sendawo enobungane. Sifuna ukwenza enye indlela 'yokutya ngaphakathi' xa uhlala nathi, ke uya kuba uxhotyiswe kakuhle ukuba ufuna ukupheka ukutya kwakho.
Ukuhamba ngeshishini? Kukho idesika enkulu kwigumbi lentsapho yeendwendwe ezifuna indawo yokusebenza ngexesha lokuhamba kwazo. Ixhotyiswe ngesibane sedesika kunye ne-USB plug-ins. Indawo yethu yokuhlamba impahla ikwaxhotyiswe ngeayini kunye nebhodi yokuayina ukuze ube nokujongeka kakuhle.
Ukuba ujonge ukonwatyiswa okuphantsi ungafumana incwadi elungileyo, iphazili yejigsaw, okanye umdlalo ongasentla kwetafile phakathi kokhetho lwethu-uluhlu olukhulu olunokhetho lwabantwana abancinci ukuya kubantu abadala. Kukwakho neentlobo ngeentlobo zokudlala ukuze abantwana abancinci bazonwabele ngexesha labo lokukhululeka.
I-Driveway iyafumaneka kwindawo yokupaka ngaphandle kwesitalato.
Indlu yethu isekupheleni kwedolophu. Ngaphaya kwesitrato kukho ulwakhiwo olutsha kwaye umbono ovela kwiveranda engasemva yintsimi yomfama. Indawo yokuhlala izolile kwaye ikhuselekile kwaye inamakhaya ahlukeneyo angabahlali abohlukeneyo.
Ababuki zindwendwe bahlala kufutshane kwaye banokufikelelwa ngokulula ngayo nayiphi na imibuzo okanye iinkxalabo ngexesha lokuhlala kwakho. Sifuna ukuba ube nemfihlo kunye neentuthuzelo ozijongayo xa uhlala eCrofter's Cottage.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kirksville